Izindaba - Izinto zokwakha i-Metal microporous zinokumelana okuhle kwezinga lokushisa nezakhiwo ezinhle kakhulu zemishini
Izinto zensimbi ezincane kakhulu zinokumelana nokushisa okuhle kanye nezakhiwo ezinhle kakhulu zemishini. Ekamelweni lokushisa, amandla wensimbi microporous impahla iphindwe ka-10 kunokwenziwe nge-ceramic material, futhi ngisho naku-700 ℃, amandla ayo asaphindwe cishe izikhathi ezine kunaleyo yempahla yobumba. Ukuqina okuhle nokushisa okushisayo kwezinto zensimbi ezincanyana kubenza babe nokumelana nokushisa okuhle nokumelana nokuzamazama komhlaba. Ngaphezu kwalokho, izinto zensimbi ezincanyana nazo zinokulungiswa okuhle nezinsimbi. Lezi zakhiwo ezinhle kakhulu zenza izinto zensimbi ezincane kakhulu zibe nokusebenziseka okubanzi nokuphakama kunezinye izinto ezincane.
Embonini yesimanje, kusetshenziswa kabanzi imikhiqizo nobuchwepheshe be-Ultramicroporous nobuchwepheshe. Kusukela embonini yokubuka yokuqala kuye embonini yendwangu esetshenziswa kabanzi, imishini yokuhlunga kanye nomkhakha wokuhlanzwa komoya, bese kuthi kwimboni ye-chip ephezulu, kukhona ubuchwepheshe bensimbi obuncane be-microporous.
Sinezinto zokucubungula nezindawo zokuhlola ezivela eJalimane, eSwitzerland, e-United Kingdom, e-United States, e-Italy, eJapane nakwamanye amazwe. Sinohlelo oluqinile lokuxhasa ukukhiqizwa kwemikhiqizo, ukuhlolwa komkhiqizo nokusetshenzwa kwethuluzi elikhethekile, ukuhambisana nozakwabo bamazwe. Sinekhono elinamandla lokuthuthukisa umkhiqizo nokuzivumelanisa nezimo emakethe.
Le nkampani inomnyango wezocwaningo nentuthuko, onganikeza izinsizakalo ezisebenzayo kumakhasimende ekuthuthukiseni umkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, sihambisana kakhulu nomoya wokusungula okuqhubekayo, futhi silwela ukukhiqiza imikhiqizo engcono, ukuze sinikeze ukusekelwa kwamakhasimende. Njengamanje, amandla wokukhiqiza wonyaka kanye nokukhishwa kwangempela kwemikhiqizo ye-spinneret yenkampani yethu kufinyelele emigodini engaphezu kwezigidi ezingama-30, futhi izinkulungwane zemikhiqizo zicutshungulwa minyaka yonke, phakathi kwazo lapho kuthuthukiswa amakhulu emikhiqizo emisha. Ngenxa yemikhiqizo ethengiswayo nedumela eliphakeme lemakethe, ihehe amabhizinisi amaningi asekhaya amakhemikhali e-fiber ukubambisana nenkampani yethu. Le nkampani inabasebenzisi abakhulu abangaphezu kwama-300 emakethe yasekhaya, kanti ingxenye yemakethe yomkhiqizo ingaphezu kwama-50%. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo yethu ye-spinneret iye yangena kancane kancane ezimakethe zaseTaiwan, South Korea, Japan, Southeast Asia, South Asia naseYurophu naseMelika, yazuza idumela elihle. Inamakhasimende angaphezu kwama-300 emazweni angaphezu kwama-40, ikakhulukazi e-India, lapho imboni yamakhemikhali e-fibre ithuthuka ngokushesha, ibala ngaphezu kuka-60% share Market.
Inqubo Yokukhiqiza Yendwangu Engavukiwe, Kk Non Nokwelukiweyo Indwangu Production Line, Isihlungi se-Pp Disc, Izindwangu Ezingavukiwe, Non-Nokwelukiweyo Indwangu Material, Isihlungi se-Pp Melt Blown, Yonke Imikhiqizo